Huawei C8816 Ofiicial Firmware - B174 - MP Firmware
Home C-Series Huawei Huawei C8816 Ofiicial Firmware - B174
Huawei C8816 Ofiicial Firmware - B174
Maung Pauk at 7:43 PM C-Series, Huawei,
Huawei C8816 Ofiicial Firmware B174 ( 799.745 MB )
More Firmware Download , Visit to http://mpfirmware.blogspot.com
အစ်ကိုတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲလက်ရှိရောက်နေတာက "C92B170" ပါ။
C8816 Build No. ရဲ. ရှေ.က " C92 " နဲ့ " C541" B170/174 မှာ "C 92/ C541"က "Country" or "Carrier" လို့ထင်ပါတယ်။
C _ _ _ မတူရင် လွယ် လွယ် နဲ့ Firmware တင်လို.မရပါ။ရရင်လဲ "Network" ပိုင်း"error" တက်တတ်ပါတယ်။ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pyae Hein said...
ဟုတ်တယ် download ဆွဲပြီးလို့တင်ကြည့်လဲပြီးပါပြီ မရပါဘူး မြန်မာမှာသုံးလို့ရတာက http://www.dlgsm.com/register.php?file=C8816_V100R001C541B170_Firmware_Burma_Android%204.3_EMUI%201.6_05012DLA.zip&dir=/C_series/C8816
အဲဒါလေးပါ တစ်ချက်လောက် အကိုဆွဲပြီး ပြန်တင်ပေးပါလား
C8816 V100R001C541B171 Firmware လိုချင်ပါတယ်ကူညီပါ။ c541 နဲ့ပတ်သတ်ရင်ရပါပြီ။
Doctor Bite Gyi said...
c8816 firmware B170 လိုခြင်တယ် မြန်မြန်အကြာင်းပြန်ပေးပါ Firmware ဘယ်လိုတင်ရလဲမလဲ ဆိုတာ သေးခြာ ပြောပြပေးပါ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် လုပ်ကြပါဦးဗျာ